दर्शकले नै घमण्डी सन्दीप भन्दै सन्दीपकै अघि नारा लगाएपछि सन्दिपले जब उनीहरुकै अघि पुगेर यसो गरेपछि …. « Onlinetvnepal.com
दर्शकले नै घमण्डी सन्दीप भन्दै सन्दीपकै अघि नारा लगाएपछि सन्दिपले जब उनीहरुकै अघि पुगेर यसो गरेपछि ….
Published :4November, 2018 1:43 pm
दर्शकले नै घमण्डी सन्दीप भनेपछि : नेपालका लागि र व्यक्तिगत क्रिकेटका लागि एक पछि अर्काे छलाङ मारिरहेका लेग स्पिनर लामिछानेले शनिबारको खेलमा रेफ्रिसँग गरेको विवाद पोखरेली दर्शकले पनि मन पराएनन्।
केही बेरअघिसम्म ‘सन्दिप सन्दिप’ भनेर हुटिङ गरिरहेका दर्शकले एक्कासि ‘घमण्डी सन्दीप, घमण्डी सन्दीप’ भनेर नारा लगाउन थाले। दर्शकको हुटिङ सुनेर कुनै प्रतिक्रिया नदिएका लामिछानेले केहीबेर पछि दायाँ हात हल्लाउँदै दर्शक दिर्घाकै छेउमा गएर ताली बजाए। आईसीसीले मान्यता दिएको खेलमा खेलाडीलाई अनुशासनमा राख्नका लागि डी मेरिट अंक दिने गरिन्छ।
दुई खेलाडीलाई स्पष्टीकरण : पीपीएलमा अन्य दुई खेलाडीलाई स्पष्टीकरण नै लिइएको छ। सन्दीपकै जस्तो रेफ्रीको निर्णयलाई नस्वीकारेका टाइटन्सकै किशोर महतो र चितवन राइनोजका सन्नी पटेललाई निर्णयबारे अनावश्यक विवाद गरेको आरोपमा म्याच रेफ्रीले स्पष्टीकरण लिएका हुन्। उनीहरु दुवैलाई विज्ञप्ति नै जारी गरी कारबाहीको चेतावनी समेत दिइएको छ। शनिवारकै खेलमा काठमाडौँका अमरसिंहलाई पनि डी मेरिट अंक दिइएको छ।
रेफ्रिको निर्णयविरुद्ध स्वीकार नगरी अनावश्क विवाद गरेपछि उनलाई पनि म्याच रेफ्रिले डि–मेरिट अंक दिएका हुन्। सन्दिपसँगै अरु खेलाडीले पनि रेफ्रीसँग आफ्नो गल्ती स्वीकारेका कारण अरु कारबाही भने नहुने भएको छ। आरोप लागेका सम्पूर्ण खेलाडीले म्याच रेफ्रीसँग गल्ती स्वीकार गरेका कारण अन्य कारवाही गरिएन।
इन्डियन प्रिमियर लिगमा सन्दीप लामिछाने समावेश टिम दिल्ली क्यापिटल्सले सातौँ जित निकालेको छ । सोमबार
इण्डियन प्रिमियर लिगमा शनिबार राती भएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले किंग्स ११ पंजाबलाई ५ विकेटले हराएको
सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा : क्रिस गेल आउट
इन्डियन प्रिमियर लिगमा नेपाली बलर सन्दीप लामिछानेले किंग्स इलाभेन पञ्जाबविरुद्ध तीन विकेट लिएका छन् ।
युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दाबेदार मानिएको इटालियन क्लब युभेन्टसको यात्रा क्वार्टरफाइनलमा रोकियो । मंगलबार राति
प्रचण्डले विप्लवलाई बम पड्काएर आउँदैन परिवर्तन भनेपछि रेखा थापाले दिइन् प्रचण्डलाई दनक : ‘आफूले चै परेवा उडाएका थियौ र ?’ (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आईतबार एक कार्यक्रममा विप्लवले
प्रचण्डले विप्लवलाई बम पड्काएर आउँदैन परिवर्तन भनेपछि रेखा थापाले